http://www.bigalspets.com/tropical-arowana-soft-line.html?___store=bapetsusen 21381 Tropical Arowana Soft Line https://smhttp-ssl-30510.nexcesscdn.net/media/catalog/product/2/8/28778-M_1.jpg USD OutOfStock /FISH /FISH/Food & Feeding Equipment /FISH/Food & Feeding Equipment/Specialty Foods <UL><LI>Specially designed feed for arowana fish</LI><LI>Provides an excellent source of protein</LI><LI>Beta-glucan stimulates fish immune systems</LI><LI>Natural colour-enhancers blended within</LI><LI>Large size with 32 g of floating sticks</LI></UL> <b>Tropical Soft Line Arowana</b> is a specialized soft floating stick feed for young and adult arowanas. Soft Line Arowana is composed by Tropical from a blend of herring and insect larvae, ingredients that taste great for arowana, encouraging healthy feeding and providing your pet with high-quality proteins and fatty acids.<br><br>Tropical Soft Line Arowana floating sticks contain beta-glucan, which stimulates fish immune systems, and natural carotenoids, which intensify fish colouration. Tropical Soft Line Arowana is produced in Large and XX-Large sticks, to accommodate the size and dietary needs of your fish. 0.0000
Tropical Soft Line Arowana is a specialized soft floating stick feed for young and adult arowanas. Soft Line Arowana is composed by Tropical from a blend of herring and insect larvae, ingredients that taste great for arowana, encouraging healthy feeding and providing your pet with high-quality proteins and fatty acids.
Tropical Soft Line Arowana floating sticks contain beta-glucan, which stimulates fish immune systems, and natural carotenoids, which intensify fish colouration. Tropical Soft Line Arowana is produced in Large and XX-Large sticks, to accommodate the size and dietary needs of your fish.